Echichi na ndị na-arụ ọrụ teknụzụ China na ndị na-eweta ya | Ugboro abụọ Mgbaaka
A ga - eweta XUZHOU DOUBLE RINGS MACHINERY CO., LTD ga - eweta ntinye teknụzụ nrụnye.
Nzọụkwụ 1. Slag Extruder tinyere n’ime Foundation |
Nzọụkwụ 2. Bulie Osi mmiri ọkụ Isi ka ntọala. Wee wụnye Platform na steepụ.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ ndị ji esi mmiri ọkụ ， Economizer (Down Part) na Gas Flue.
Nzọụkwụ 4. Jikọọ Economizer (Up Parts) na Gas Flue.
Nzọụkwụ 5. Jiri eriri asbest dozie Idozi Economizer na Gas Flue. Ejikwala mmiri na-agbapụta mmanụ.
Kwụpụ 6. bulie Domi ahịhịa na ntọala.
Nzọụkwụ 7. Jikọọ ma dozie Mgbapu Gas n'etiti Djá Cleaner na Economizer.
Nzọụkwụ 8. ebuli ID Fan ka Foundation
Kwụpụ 9. Jikọọ ma dozie friji Gas n'etiti Dust Cleaner na ID Fan.
Kwụpụ 10. Welie na Wụnye Chimney, Jikọọ ID Fan na Chimney.
Nzọụkwụ 11. Wụnye FD Fan
Nzọụkwụ 12. Wụnye Feedal Coal
Kwụpụ 13. Wụnye mbelata
Nzọụkwụ 14. Wụnye Valve & nlele na esi mmiri ọkụ
Wụnye valve & nlele nke Economizer
Nzọụkwụ 15. Wụnye Cylinder Distam Steam, jikọọ Main Steam Pipe na Valve & Gauge.
Ahịa na-ahazi Steam Pipe Route dịka ezigbo ọnọdụ ụlọ ọrụ ha dị.
16.kwụ na 16.kwụ 16. Wụnye Nrụpụta Mmiri na valve & nlele
Ahịa na-ahazi Pipe Route mmiri dịka ezigbo ọnọdụ ụlọ ọrụ ha dị.
Ertdị Vetical Awọ Mpempe Akwụkwọ Na-achọ Mkpa Nweta.
Nzọụkwụ 17. Wụnye Light, Motor Electric Waya na Electric Control Cabinet
Ndị ahịa na-ahazi ụzọ ụgbọ ala ọkụ eletrik dịka ezigbo ọnọdụ ụlọ ọrụ ha dị.
Nzọụkwụ 18. Wụnye Ọgwụ Mmiri
Ngwunye nwụnye niile na-emecha
Mara: Usoro a na-atụ aro site na Mgbaaka Abụọ. Ezi Ọrụ dịka ọnọdụ obodo na Akwụkwọ ntuziaka. Foto dị na akwụkwọ a bụ ka ị gosipụta. Ihe ntanetị dị n'okpuru aka nnata ego nnata.
Ọrụ mgbe erechara ya
Ọrụ mgbe ere:
Oge Akwụkwọ ikike Otu Year maka Dum ji esi mmiri ọkụ na-enweghị ndudue ọrụ mgbe Mbupu.
Ọrụ Teknụzụ Maka ndị ahịa, onye ahịa nwere ajụjụ ọ bụla gbasara igwe eji agba mmiri, ndị injinia anyị ga-eje ozi ma weta Ọrụ Teknụzụ ozugbo.
Ntuziaka Ntuziaka Mgbe emechara ntọala ma gbaa mmiri rutere n'ụlọ ọrụ nke ndị ahịa, ndị injinia abụọ ga-aga n'ụlọ ọrụ ndị ahịa na ntinye aka na ndị ọrụ obodo.
Ingchịkọ Mgbe etinyere ya, ụgbọ a ga-enye ọrụ na ọzụzụ maka ụbọchị 2 ụbọchị.
Nchaji Onye nzụrụ ahịa kwesịrị inye tiketi ụgbọ elu na njem njem, ebe obibi, nri na nkwukọrịta mpaghara yana njem maka ndị injinia, gbakwunyere enyemaka maka injinia ọ bụla.
Osote: Ihe esi esi mmiri ọkụ
ọrụ mmiri ọkụ
ọrụ oku esi mmiri ọkụ
nkwado igwe na uzu ikuku
ọrụ mmanụ ụgbọ mmiri China
teknụzụ dị ọkụ China